Pep Oo 7 Cayaartooy Barca Kaga Bedelanaya Ousmane Dembele Iyo Sergi Roberto – Garsoore Sports
Pep Oo 7…
Pep Oo 7 Cayaartooy Barca Kaga Bedelanaya Ousmane Dembele Iyo Sergi Roberto
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa dhawaan la kulmay madaxweynaha Barcelona Joan Laporta si ay uga wada hadlaan heshiisyo labada koox ay cayaartooy isku dhaafsan karaan, iyadoo tababaraha City uu doonayo Sergi Roberto iyo Ousmane Dembele.
Labada ciyaaryahan hal sano ayaa uga harsan qandaraasyadooda haatan ee Camp Nou. Roberto ayaa loo sheegay inuu xor u yahay inuu ka tago kooxda xagaagan, halka Barcelona ay uga digtay Dembele in sidoo kale la iibin doono haddii uusan dhawaan aqbalin qandaraas kordhinta.
Xiisaha City ee Roberto ayaa la ogaaday kaliya todobaadii ugu dambeeyay, laakiin wariyaha raadiyaha RAC1 ee Gerard Moreno ayaa haatan shaaca ka qaaday in Guardiola sidoo kale eryanayo Dembele wuxuuna u sheegay Laporta inuu kooxdiisa ku haysto 7 ciyaartoy oo loo isticmaali karo beddelka labadan.
Ma jiraan wax xusid ah oo ku aaddan magacyada 7 cayaartooy oo ku jirta warbixintan RAC1, laakiin haddii xoogaa la qodqodo, waxaa laga heli karaa kuwo xoogaha faro-ku-tiris ah oo la iibin karayo.
Daafaca dambeedka dhexe Aymeric Laporte ayaa loo magacaabay nin miisaan culus sameyn kara goor hore, waxaana Sport ay sheegaysaa in ciyaaryahanka reer Spain uu cadaadis ku saarayo City inay ka iibiso Barcelona kaddib xilli ciyaareed oo uu boos cayaareedkiisa ku waayay Ruben Dias iyo John Stones.
Duncan Castles oo ah wariye cayaaraha ka faallooda ayaa intaas ku daray in Bernardo Silva, oo doonaya inuu ka tago City, isagoo dalab ka helaya Barcelona, halka wadahadalo sidoo kale laga yeeshay oo ku saabsan adeegsiga daafaca dambeedka middig Joao Cancelo si qeyb looga dhigo heshiiskan is dhaafsiga ah.
Laacibka garabka ka ciyaara ee Raheem Sterling ayaa sidoo kale dhawaan loo magacaabay bartilmaameed bartilmaameed u ah kooxda Barcelona ee Sport, in kasta oo Guardiola diyaar u yahay inuu iska fasaxo garabka reer England xagaagan weli ma cadda.
Si la mid ah, waxaa sidoo kale jirta warbixin dhowaan lasoo bandhigay oo muujineysa in Barcelona ay dooneysay weeraryahan Gabriel Jesus iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ilkay Gundogan.
Jesus ayay u badan tahay in la iibin doono xagaagan kaddib markii uu ku guuldareystay inuu ka dhaadhiciyo City inuu beddeli karo Sergio Aguero, laakiin waa wax aad u adag in la arko Guardiola oo iska fasaxaya Gundogan kaddib xilli ciyaareedkiisii fiicnaa ee 2020-21.
Haatan, fikradda ah in labada dhinac ay kala wareegsadaan Sergio Roberto ayaa sii xoogeysaneysa, laakiin u dhaqaaqis kasta oo Dembele ah waxaa cakiraya rabitaanka yar ee Barcelona oo ah inay ceshato ciyaaryahankan garabka ka ciyaara.
Barcelona ayaa siin doonta Dembele fursad uu ku saxiixo heshiis cusub maadaama ay u arkaan inuu yahay udub dhexaad mustaqbalka ah, laakiin haddii uu sii socdo dib u dhaca wadahadalada, kama waaban doonaan inay lacag helaan sidoo kale waxay aqbali karaan heshiisyadan isdhaafsi ee City .
Barcelona Oo Goordhow Ku Dhawaaqeysa Depay
Suuqa: Wararkii Ugu Dambeeyay Maanta & Xanta Suuqa